RAHARAHAM-BAROTRA SY NY BANKY : Betsaka ny tsy mandray “chèque” ny mpivarotra
Maro ireo mpivarotra eto Mahajanga no tsy mety mandray chèque na taratasim-bolan’ireny banky ireny. 26 septembre 2018
Betsaka no tsy mandray izany ireo Magazay lehibe, mpivarotra solika, trano fisakafoanana sy fivahiniana. Antony maro no mahatonga izany. Ao ireo mpanjifa manao taratasim-bola tsy misy anto-bola (chèque sans provision). Fa anisany tena antony ihany koa ny filam-baniny ataon’ny banky. Raha vao misy diso kely ny fomba fanoratra dia averin’izy ireo avy hatrany ilay taratasim-bola. Matetika anefa ireo orinasa dia mandrotsaka taratasim-bola maromaro ka rehefa averina ny taratasim-bolany dia misy sarany alain’ny banky aminy.
Io sarany io dia amin’ny kaontin’ny orinasa nandray ilay taratasim-bola no alain’ny banky. Amin’ny tobin-tsolika iray eto Mahajanga dia navahan’izy ireo mihitsy ny taratasim-bola avy amin’ny banky BNI-CL. Amin’io banky io, hoy izy ireo na ny mari-bola tsy misy “s” raha tokony hisy, na koa tsy voasoratra hoe ariary dia efa miverina hatrany. Sahirana araka izany ny mpanjifa, tsy maintsy maka ravim-bola vao afaka mividy zavatra na mandoa saran’entana.
Ny lalàna dia manery ny tsirairay handray ireny taratasim-bola ireny. Ireo trano fivarotana lehibe moa dia manana masinina manoratra azy ireo, fa amin’ny ankapobeny kosa dia mbola fenoina tanana, izay no matetika mampisy ny fanoratana diso, na dia azo tsara aza ny dikany. ohatra hoe “vingt” lasa vint na sept lasa set. Ireo anefa dia tsy raisin’ny banky mihitsy nefa matetika na ny mpandray ireo taratasim-bola na ny mpanome tsy dia mahafehy teny frantsay loatra, indrindra ny fomba fanoratra.